Fiainana andavanandro : Mitobaka ny vary vao eny an-tsena -
AccueilSosialyFiainana andavanandro : Mitobaka ny vary vao eny an-tsena
Fiainana andavanandro : Mitobaka ny vary vao eny an-tsena
17/04/2018 admintriatra Sosialy 0
Latsaky ny 2 000 Ariary ny kilaon’ny vidim-bary eto an-drenivohitra, ankoatra ny makalioka izay manodidina ny 2 500 Ariary eo ny kilao amin’izao fotoana izao. Noho ny fitobahan’ny vary vao avy any amin’ireo faritra mpamboly vary eto Madagasikara no antony. Na dia mitobaka aza anefa izany eny an-tsena dia tsy misy mpividy noho izy tsy mitombo araka ny fanazavana. “Izaho tena tsy mandray vary vao mihitsy amin’izao fotoana izao fa tsy mandeha. Tsy misy mividy mihitsy ilay izy noho izy tsy mitombo. Ho an’ny vary makalioka izao dia 2 300 Ariary ny kilao, izay 110 000 Ariary ny iray gony, ary 2 500 Ariary ny makalioka tranainy”, hoy ny mpivarotra atsinjarany iray, eny 67ha. Ity farany izay mbola nanampy fa tsy takatry ny mpanjifa intsony ny vidin’ny vary makalioka. Ireo vary karazana hafa, toa ny tsipala, dista, botra, sns kosa indray izay samy latsaky ny 2 000 Ariary ny kilaon’izy ireo, manodidina ny 1 700 Ariary hatramin’ny 1 900 Ariary. Nilaza moa ny mpaninjara fa avy any Bongolava, Sofia, Marovoay, Menabe ny ankamaroan’ireo vary vao miakatra ireo, ka mampidina tsikelikely ny vidim-bary eto an-drenivohitra.
Miresaka vidin’entana izay hatrany dia nahitana fiakarana avo roa heny ny vidin’ny ovy eny an-tsena efa roa herinandro izay. Raha manodidina ny 500 Ariary hatramin’ny 800 Ariary izany teo aloha dia tsikaritra fa tafakatra hatrany 1 500 Ariary hatramin’ny 1 900 Ariary. Tsy vitan’ny lafo be anefa izany fa mbola ratsy koa ny kalitao. Araka ny fanazavan’ny mpivarotra ovy eny Anosibe, antony mampiakatra ny vidin’ny ovy ny lalana ratsy vokatry ny orana fa koa tsy vanim-potoanan’ny famokarana ovy amin’izao fotoana izao. Afaka iray volana eo no voalaza fa fotoanan’ny famokarana ovy, izay marihina fa in-telo mamokatra isan-taona.
Mitohy ny asa. Raha mbola miezaka ny mitady hevitra hanakorontanana ny mpanohitra, manohy hatrany ny asa fampandrosoana ny fitondram-panjakana ary ao anatin’izany ny fifandraisana amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fijerena ny zava-misy any amin’ny Faritra. ...Tohiny